China Aluminium Plastic Film factory na-emepụta | Yongjie
Main alloy: 8021
Ojiji Ngwaahịa: Batrị Pack
Uru nke Yongjie:
1.There bụ usoro nhazi aluminom zuru ezu site na aluminium ingots na ngwaahịa emechara, a na-achịkwa usoro dum site na aluminium ingots rue ngwaahịa emechara.
2.N'oge mbu nke mmepe ihe eji emeputa ihe eji eme aluminium, otutu otutu ihe mejuputara emeputa, ma aghota ihe omuma nke 8021 alloy.
3.Aluminium-plastic film na ngwaahịa na-gụnyere na mmepe nke ọhụrụ ngwaahịa, na ekesịpde ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eduga dị na ngwá dị ka German na Slovenian mpịakọta, egweri wiil si Japan, na pinhole ule dị si South Korea.
Hot Rolling-Nzuzo Rolling-Annealing-nhicha-Foil nkedo-slitting -Annealing-mbukota
8021 aluminum foil bu isi ihe eji na batrị. Ọ nwere ezi opacity na ike mmiri àmà & igbochi ikike. 8021 aluminom foil anaghị egbu egbu ma ọ nweghị isi. The 8021 aluminum foil alloy na ọtụtụ-eji dị ka nkwakọ ihe onwunwe mgbe recombination, ebi akwụkwọ na gluing. Enwere ike ịhazi alloy 8021 n'ọtụtụ mmesho dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
8021 Aluminium Foil Njirimara: 8021 alumini foil bu ego, inogide, nke adighi egbu egbu, na mmanu mmanu. Na mgbakwunye, ọ na-eguzogide mwakpo kemịkal ma na-enye ọmarịcha eletriki na mkpuchi na-enweghị magnetic. Oyi akpụ foil ike nnọọ iguzogide vepo, oxygen na ezi arụmọrụ nke esi ísì mgbochi. 8021 aluminum alloy ana achi achi mma arụmọrụ maka ngwa dị ka ọgwụ nkwakọ, electronic nkwakọ, batrị shei na niile nke na-achọ ihe mgbochi arụmọrụ.
Batrị mkpọ foil 8021 bụ alloy kere si dị ọcha, aluminum isi foil n'obi na ndị ọzọ ọcha. Ọ na-adịkarị n'etiti 0.035 na 0.06 mm dị omimi, a na-emepụta 8021 aluminum foil n'ọtụtụ obosara na ike.
Iwe a na-ejikarị ọkụ nke 8021 aluminum foil gụnyere H14, H18, H22, H24 na O. Mill mechara okpokoro aluminium dị ka batrị shei batrị, ọgwụ ọgwụ dị n'aka anyị.
Nke gara aga: Batrị Aluminium Foil
Osote: Kwes nnyefe usoro ngwa ihe